Ogaden News Agency (ONA) – Qormadi 3aad: Maxay Ogaadeenya ku xusuusan doontaa sannadkii 2012? “Wadahadalladii nabadeed ee JWXO iyo Itoobiya”
Wadahadalladii nabadeed ee JWXO iyo Itoobiya
Akhristayaal qormadan waxaan jeclahay inaan ku soo qaato wadaxaajoodyadii burburay ee daba-yaaqadii 2012-ka dhex-maray Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogaadeeny JWXO iyo xukuumadda gumaysiga Itoobiya. Dad badani waxay rumaysan yihiin in wadahadalladaasi ay ahaayeen kuwo taariikhi ah oo mudan in taariikhda Ogaadeenya lagu xuso.
Wadahadalladan, oo lagu qabtay magaalada Nairobi, waxay ahaayeen laba wareeg. Wareeggii kowaad wuxuu dhacay intii u dhaxaysay 6 – 7 September 2012. Wareeggii labaadna wuxuu dhacay intii u dhaxaysay 15 – 17 October 2012. Wadahadalladan waxaa martigelisay dowlada Kenya, oo aqbashay inay gogoha fidiso, ka dib markii ay xukuumadda Itoobiya si rasmi ah uga codsatay inay dhexdhexaadiso iyad iyo JWXO.
JWXO ayaa iyaduna oggolaatay inay wadaxaajood nabadeed la yeelato xukuumadda Itoobiya, mar haddii shuruudihii ay JWXO ku xidhay wadaxaajoodka oo dhan la helay, isla markaana ay dowlada Kenya ballanqaaday inay wadahadallada dhexdhexaadinayso, iyadoo la kaashanaysa beesha caalamka.
Ergada matalaysay dowlada Kenya runtii dadaal aad u badan ayay galiyeen wadahadallada, waxayna ka shaqeeyeen sidii ay wadaadalladu u noqon lahaayeen kuwo midha-dhala, iyagoo muddo dheer u kala dab-qaadayay labada dhinac, si ay aragtidooda isugu soo dhaweeyaan, ka hor intaanay fool-ka-fool u kulmin. Kulanno badan oo gooni-gooni ah ayay labada dhinac la yeesheen, kuwaasoo ka horreeyay is-araggii Nairobi.
Waxay labada dhinacba la wadaageen qaabka ay doonayaan in wadaxaajoodyadu u dhacaan. Waxay sidoo kale labada dhinacba ka dhagaysteen arrimaha ugu muhiimsanee dhinac waliba uu dhinaca kale ka doonayo. Arrimo badan oo markii hore caqabad ku noqon lahaa wadaxaajoodka ayay xal la isla waafaqsan yahay ka gaadheen. Waxay sidoo kale si joogto ah labada dhinac ugu gudbinayeen marba hawshu meesha ay marayso iyo horumarka laga sameeyay marba wixii hawl ah ee beesha caalamka ku xidhan.
Iyadoo ay hawshu sidaas u diyaarsan tahay, ayaa magaalada Nairobi oo lagu ballansanaa la isugu tegay, iyadoo la filayo in si toos ah loo gudagalo arrimaha gundhigga u ah dhibaatada dhex-taalla Ogaadeenya iyo Itoobiya.
Laakiin nasiib darro waxaa markiiba soo baxay ifafaalayaal muujinaya in xukuumadda Itoobiya ay labo arrimood mid uun tahay. In ayna diyaar u ahayn wadahadallo rasmi ah oo ay la gasho JWXO iyo in ayna karti iyo aqoon midna u lahayn inay dhinac ka noqoto wadaxaajoodyo rasmi ah oo dhexdhexaadiyayaal caalami ahi ay joogaan.
Ergada ay Itoobiya soo dirsatay ayaa u muuqday kuwo aan diyaarsanayn oo aan si dhab ah u garanaynin ujeeddada ay wadaxaajoodka ka leeyihiin iyo natiijada ay ka filayaan. Waxay ahaayeen xubno aan iyaga laftoodu isku mawqif ahayn, isla markaana aan wadanin qorshe cad oo dowladi soo diyaarsatay. Waxay ahaayeen dad iyagu is-burinaya oo nin waliba doodda dhinac ka dhiibanayo, iyadoo mararka qaarkood ay dooddoodu is-waydaaranayso. Waxaana suuragal ah in arrintaas ay ugu wacnayd iyagoo, sidaan sheegnay aan qorshe diyaarsan madasha la imaanin, iyo iyadoo xubnaha intooda badani ay afkooda oo kaliya yaqaaneen, oo luqada lagu wadaxaajoonayay aanay waxba ka aqoonin.
Dhinaca kale ergada JWXO ayaa iyadu ahayd ergo si fiican loo diyaariyay, isla markaana ku hubaysan qorshe cad oo si habsami ah loo tifatiray, waxayna garanayeen waxa ay doonayaan iyo waxa ay ka dagaallamayaan. Waxay karti u lahaayeen inay kaadh walba meesha ku habboon dhigaan, xilliga ku habboona la soo baxaan, waxayna muujiyeen karti iyo xirfad ay ugu xoog-sheegteen xubnihii gumaysigu soo dirsaday.
Markii wareeggii hore lagu kala-tegay, waxay xukuumadda Itoobiya garwaaqsatay inaanay waxba ka keeni karin wadahadallada, isla markaana ayna ku guulaysan karin inay ka gaadho danihii ay ka lahayd. Sidaas darteed waxay go’aansatay inay burburiso, si loogu kala-tego iyadoon waxba ka soo bixin.
Waxaa muuqatay in xukuumadda Itoobiya ay barnaamijkaas fashilinta ah la timid wareeggii labaad ee wadahadallada. Waxay miiska soo saartay shuruud cusub oo aan la isku ogayn, taasoo ay ka mid ahayd in JWXO ay aqbasho dastuurka Itoobiya, ka hor intaan qodobada kale laga wadahadlin.
Dowlada Kenya iyo beesha caalamkuba waxay si aad ah ugu dadaaleen inay Itoobiya ku qanciyaan inay joojiso shuruudaha hordhaca ah, isla markaana ay ixtiraamto heshiiskii la isla gaadhay wareeggii hore ee wadahadallada. Waxaa loo sheegay in qodobbada ay codsanayaani ay ku jiraan ajandayaasha wadahadalka, sidaas darteed iyaga looga baahan yahay inay la yimaadeen xirfaddii iyo kartidii ay dhinaca kale kaga dhaadhicin lahaayeen doodaha ay qabaan.
Laakiin ugu denbayntii ergada Itoobiya waxay sheegeen inaanay idan u qabin inay wax kale ka sii hadlaan, waxayna irrida ka dareereen iyagoo luqadooda ku murmaya. Aad looma wada-maqlaynin waxa murankooda saldhigga u ahaa, laakiin hadallada duul-duulka ahi waxay tilmaamayeen inay ka doodayeen “martiqaad iyo canjeelo amxaar”.
Wadahadalladii Kenya ee u dhexeeyay JWXO iyo Itoobiyana sidaas ayay ku burbureen, iyadoo beesha caalamku ay markhaati cad ka noqotay in cidda diiddan nabaddu ay tahay xukuumadda Itoobiya, iyo in Jabhadda Waddniga Xoreynta Ogaadeenya ay tahay jabhad xaq u-dirir ah oo u dagaallamaysa inay xaqeeda soo dhacsato oo kaliya.
Qormada 4aad, oo ah midd ugu denbaysa, waxaan ku soo qaadan doonaa “Xaaladda Maxaabiista Ogaadeenya, waxaanan waraysan doonaa mid maxaabiista ka mid ah”.
Sidoo kale Aqriso Qormadii 1aad / 2aad